Abavelisi be-barium sulphate kunye nefektri - China abaenzi beSulphate abavelisi
I-1250 mesh superfine precipised barium sulphate
Iveliswa yinkqubo yokuhambisa imichiza ephezulu yasekhaya, eneempawu eziphezulu zomzimba, ukungcola okungaphantsi koomatshini, ukucoceka okufana kakhulu, umgubo omhlophe omhlophe, ongeyityhefu, ongenakunyibilika emanzini, enyibilikayo ekufumaneni i-asidi yesulfuric, enyibilikayo kancinci ekubiliseni I-hydrochloric acid yimichiza. izinzile, kwaye iyancitshiswa ngokwasempilweni ukuba ibe yi-barium sulfide nekhabhoni. Ayizukutshintsha umbala xa idibana ne-hydrogen sulfide okanye igesi eyityhefu emoyeni. Yimveliso ekumgangatho ophezulu yeemveliso ezifanayo zasekhaya, enika izinto ukuxinana okuphezulu kunye nokugqitywa komphezulu.
I-crystal ye-orthorhombic engenambala okanye i-white amorphous powder. Ukuxinana kwesihlobo ngu-4.30. Indawo yokunyibilika yi-1580 ° C. Phantse ungenakunyibilika emanzini, i-ethanol kunye neasidi. Ukunyibilika kwishushu eshushu eshushu, kulula ukuyidibanisa xa yomile. Ikhabhoni inokuncitshiswa kwi-barium sulfide kwi-600 ° C.
I-Barium sulfate yamaphepha okuqhekeza
I-barium sulphate yendalo, ikhethiwe ibanga eliphezulu le-barium sulphate ore kwaye iveliswe yitekhnoloji yokuhlela ibhola. Imveliso inokusasazeka kobungakanani bamasuntswana, indawo encinci encinci kunye nozinzo oluphezulu lweekhemikhali. Umxholo ophezulu we-barium sulphate, ubumhlophe obuphezulu, ubunyulu obuphezulu, ukumelana nokuguga. Kwangelo xesha, ukuqina, ukungaguquguquki kunye nokunxiba ukumelana nemveliso kunokuphuculwa, kwaye uzinzo lulungile. Ingakwazi ukufunxa i-X-ray kunye ne-γ-ray, kwaye inike umbandela ngoxinano oluphezulu kunye nokugqitywa komphezulu.
I-Barium sulfate inokusetyenziswa njenge-extender ukunciphisa inani le-titanium dioxide esetyenzisiweyo kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Ukufakwa kweoyile esezantsi kakhulu kunye nokunyuka koxinzelelo lwevolumu kungagcina izinto ezisisiseko se-resin.
Ukucutha i-barium sulphate
Iveliswa yinkqubo yokuhambisa imichiza ephezulu yasekhaya, eneempawu eziphezulu zomzimba, ukungcola okungaphantsi koomatshini, ukucoceka okufana kakhulu, umgubo omhlophe omhlophe, ongeyityhefu, ongenakunyibilika emanzini, enyibilikayo ekufumaneni i-asidi yesulfuric, enyibilikayo kancinci ekubiliseni I-hydrochloric acid yimichiza. izinzile, kwaye iyancitshiswa ngokwasempilweni ukuba ibe yi-barium sulfide nekhabhoni. Ayizukutshintsha umbala xa idibana ne-hydrogen sulfide okanye igesi eyityhefu emoyeni. Yimveliso ekumgangatho ophezulu yeemveliso ezifanayo zasekhaya. Ukongezwa kwe-barium sulphate kwisicelo kunokunika into ebonakalayo isicwebezelisi, ukusasazeka kwayo kulungile, kwaye kunokunciphisa iindleko.
Ukulungiswa kwe-barium sulfate
Ukuphucula ukusebenza kwemveliso, unyango lwe-chemical interface lwenziwa kwi-barium sulfate. Imveliso inyangiwe ngomhlaba ophilayo okanye ongaphiliyo ukunciphisa uxinzelelo kumphezulu kwaye unokuchaneka okuhle kunye nokuhambelana. I-barium sulphate eguqulweyo inokusasazeka kobungakanani bamasuntswana, ubumhlophe obuphezulu kakhulu, kwaye akukho bumdaka. Inobumbano obomeleleyo kwaye inika umbandela ubuninzi obuphezulu kunye nokugqitywa komphezulu.
I-barium sulphate ebengezela kakhulu, ikhethwe kwinqanaba eliphezulu le-barium sulphate ore eveliswe kukugaya ibhola okuqhubela phambili kunye netekhnoloji yokuhlela. Imveliso inebala elimxinwa lokusasaza ubungakanani bamasuntswana, iipropathi ezinzileyo zeekhemikhali, i-gloss elungileyo, ubumhlophe obuphezulu, kunye nokusasazeka okugqwesileyo kunye neepropathi zokulinganisa.
Ukukhanya okuphezulu kwe-barium sulfate ine-asidi elungileyo kunye nealkali ukumelana netyuwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokubola kunye nokuguga. Inokubuphucula ubunzima, ukungaguquguquki kunye nokunxiba ukumelana nemveliso, kwaye iyenze imveliso icwebe kwaye izinzile. Ingasetyenziselwa njenge-extender ukunciphisa inani le-titanium dioxide esetyenzisiweyo kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Ukufakwa kweoyile esezantsi kakhulu kunye nokunyuka koxinzelelo lwevolumu kungagcina izinto ezisisiseko se-resin.
Sebenzisa ubuchwephesha be-nanotechnology, imveliso iyingxubevange ye-organic kunye ne-inorganic eshinyeneyo. Ukuhanjiswa kobungakanani bamasuntswana amancinci, uzinzo lweekhemikhali olufanelekileyo, iqondo eliphezulu lokusebenza, ukusasazeka okuhle, ubumhlophe obuphezulu kunye nezinye izinto. Ntumbuluko High, ukumelana acid, ukumelana kwealkali, ukumelana lobushushu eliphezulu kwaye akukho ilahleko isilungiseleli seglosi, elungileyo ukumelana ityuwa zokutshiza kunye nokumelana kwemozulu. Ingasetyenziswa ngokubanzi kwiipeyinti ezahlukeneyo ezisekwe emanzini, iipeyinti zomthi ezisekwe emanzini, ii-inki, iiplastiki kunye nezinye iimveliso. Inokugcina ukuqaqamba kweemveliso. Ingasetyenziswa njenge-masterbatch ebonakalayo ye-barium sulphate, kwaye ingabuphucula kakhulu ubumenyemenye bomhlaba, ukuqina kwefilimu, ukumelana nemozulu, kunye nokuGxila ekuncedeni nasekunciphiseni iindleko.
I-Barium sulfate yepeyinti
I-Barium sulfate yerabha
I-Barium sulfate yeebhetri